Global Voices teny Malagasy · 12 Desambra 2019
12 Desambra 2019
Tantara tamin'ny 12 Desambra 2019
Firaisankina ho an'i Yuli Riswati, ilay Indoneziana mpiasa an-trano noroahana fa nitantara momba ny fihetsiketsehana tany Hong Kong
Azia Atsinanana12 Desambra 2019
"Izahay dia manameloka ity fihetsika ity izay mety natao hampitahorana ireo mponina tsi-maharitra ary hanakana azy ireo tsy handray anjara na hitatitra sy haneho hevitra momba ny hetsika politika eto Hong Kong."
15 taona ny Global Voices!
Mediam-bahoaka12 Desambra 2019
Koa satria tonga amin'ny faha-15 taona isika dia maka fotoana izahay hisaorana ny vondrom-piarahamonina manerantany mandray anjara sy ireo mpamaky sy mpanohana nanome ho an'ny Global Voices hery sy angovo haharetana.
Sazy ara-toekarena : nahoana i Thaïlandy no tsy voakitika?
Fitaovana iray "tena ilaina" ho an'ny Fiombonambe eoropeana ireo fanasaziana ara-toekarena, fitaovana tsy maintsy ampiasaina ho fiarovana fa tsy fanasaziana. Hafahafa fa tsy voakitika amin'izany i Thailandy, izay firenena ambany vahohon(ny tafika